Ọdịnihu abụghị ihe efu ma ọ dịbeghị | Martech Zone
Ọ ga-abụrịrị na nsogbu gbasara ọdịnihu nke ọgụgụ isi, robotik na akpaaka ga-akwụsị. Mgbanwe ọ bụla nke mmepụta ihe na teknụzụ n'akụkọ ihe mere eme mere ka ụmụ mmadụ nwee ohere na-akparaghị ókè maka itinye ikike na nka ha n'ọrụ. Ọ bụghị na ụfọdụ ọrụ anaghị akwụsị - n'ezie ha na-akwụsị. Mana ọrụ ndị ọzọ nọchiri anya ọrụ ndị ọzọ.
Ka m na-elegharị anya n’ọfịs m taa ma nyochaa ọrụ anyị, ọ dị ọhụụ! M na-ele ma na-eweta na AppleTV anyị, anyị na-ege egwu na Amazon Echo anyị, anyị mepụtara ọtụtụ ngwa ngwa maka ndị ahịa, anyị nwere mmemme ozi maka ndị ahịa, n'izu a, anyị nyeere ndị ahịa abụọ kachasị aka nsogbu okwu ọchụchọ dị mgbagwoju anya, m na-ebipụta nke a na sistemụ njikwa ọdịnaya, anyị na-akwalite isiokwu site na mgbasa ozi mmekọrịta.
Nke bụ eziokwu bụ, echetụbeghị m echiche ọbụna afọ 15 gara aga na m ga-enwe ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ nke m ma na-enyere ndị ahịa aka ịnyagharịa ahịa n'ịntanetị. Thezọ ga - eme n’ọdịnihu adịchaghị na - adị gịrịgịrị, ọ na - emepe emepe na mbara! Oge nke ọ bụla nke akpaaka na-enyere ọhụụ ọhụụ ọhụụ na ihe ọhụrụ. Ọ bụ ezie na anyị na-eme ọtụtụ echiche na ọrụ okike maka ndị ahịa anyị, ọtụtụ ụbọchị anyị ejirila na-agagharị data, ịtọ ntọala usoro, na imezu. Ọ bụrụ n’inwe ike iwelata ihe ndị ahụ, anyị nwere ike ịmepụta ọtụtụ ihe.
Ekwenyere m na ihe ịma aka anyị, ọkachasị na United States, bụ na anyị na-akụzi ma na-akwadebe ụmụ akwụkwọ anyị maka ọrụ ga-apụ n'anya. Anyị kwesịrị usoro zuru oke iji kwadebe ọgbọ ndị na-esote ịkụ ala na-arụ ọrụ na teknụzụ ọhụrụ ndị a.
Ndụ ndi mmadu mepụtara ihe omuma a, Ọrụ 15 na-adịbeghị afọ iri atọ gara aga. Ka ị na-enyocha ndepụta nke ọrụ na nkezi ụgwọ ọnwa, rịba ama ole ha dị na mgbasa ozi dijitalụ!
Tags: ngwa MmepụtaBloggeronye isi na-ege ntịndu ndi colonialonye ọrụ dronen'ọdịnihuinfographicozi nchekwa nyochaọrụseo ọkachamaraonye njikwa mgbasa ozionye ọrụ mmebe ihemebere nnyemaakaweb nyocha